MORISAKI WIN ACOUSTIC LIVE - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›MORISAKI WIN ACOUSTIC LIVE
MORISAKI WIN ACOUSTIC LIVE – CHRIS’s FIRST CHRISTMAS TIME IS HERE 〜MYANMAR EDITION〜
Morisaki Win က မြန်မာပြည်မှ ချစ်ရသော ပရိသတ်များအတွက် အထူး Online Live Stream ပွဲလေးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီပွဲလေးကတော့ မြန်မာပြည်က ပရိသတ်များအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် Online Live Stream ပွဲလေး ဖြစ်မှာပါ။ ဒီပွဲလေးမှာ Morisaki Win ကနေလည်း ချစ်ပရိသတ်တွေ ပျော်ရွှင်၊စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူ၊ အထူးလက်ဆောင်လေးတွေလည်း ပေးသွားမှာနော်။ ဒီပွဲလေးရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့ ….
– ကျင်းပမည့်အချိန် –
2020 . December 22th (tue)
Archive Live Video Available Time : Until 2020. December 23th 23:59 PM
– Online Ticket Fee –
1 Ticket – 5,000 Ks (Ticket Sale Period : 01 Dec to 18 Dec 2020 )
– Online Ticket ဝယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့် –
01. Chelmo Messenger မှ Morisaki Win Live Messenger သို့ဝင်ရန်။
02. မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘဏ် (KBZ,CB) သို့ Online Ticket Fee 5,000 Ks ကိုလွှဲရန်။ *ဘဏ်မှ ငွေလွှဲစဉ် Reason တွင် ” MW20201222 ” ကိုထည့်သွင်း၍ လွှဲရန်။
03. လွှဲပြီးနောက် Morisaki Win Live Messenger အတွင်းတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပြီး၊ “Submit” လုပ်ရန်။
Remark : ၁ဦးလျှင် ၁ကြိမ်သာ Online Ticket ကိုဝယ်ယူခွင့်ရှိပါသည်။
“MORISAKI WIN ACOUSTIC LIVE” Online Ticket ဝယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့်ကို Video လေးဖြင့်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Morisaki Win Acoustic Live Online Ticket Purchasing Process
"MORISAKI WIN ACOUSTIC LIVE" Online Ticket ဝယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့်ကို Video လေးဖြင့်တင်ပြထားပါတယ်။#Morisaki_Win #Morisaki_Win_AcousticLive #Myanmar_Edition
Posted by Chelmo on Wednesday, December 2, 2020
– စည်းကမ်းချက်များ –
Live Stream လွှင့်နေသော နေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခွင့်မရှိပါ။
Live Stream ထုတ်လွှင့်ပြသမည့်အချိန်သည်၊ ထိုနေ့၏ အခြေအနေကြောင့် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
Live Stream ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် Online Ticket ကို Live Stream မတိုင်ခင်သတ်မှတ်ထားသော နေ့ရက်အတွင်း ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ Online Ticket ကို Chelmo Official Page တနေရာတည်းမှသာလျှင် ရောင်းချပေးပါမည်။ Live Stream Online Ticket ကို မြန်မာပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်သူများသာ ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Online Ticket မဝယ်ခင်၊ Live Stream ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သော Internet အပြင်၊ Live Stream ကိုကြည့်ရှု့နိုင်သော Device ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
Online Ticket ဝယ်ယူပြီးနောက်၊ Live Stream သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရက်ရွှေ့သည်ဖြစ်စေ၊ Live Stream ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ရှိသော် Online Ticket အတွက်ကျသင့်သော တန်ဖိုးငွေကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
Live Stream လွှင့်နေချိန်တွင် Internet အမြန်နှုန့်နှေးသွားခြင်းကြောင့်လည်ကောင်း၊ Live Stream လွှင့်နေသော Platform ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြသနေသော ရုပ်ပုံများသည် ရုတ်တရက် ရပ်သွားခြင်း၊ Connection ပြတ်တောက်သွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေများဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် Online Ticket ကျသင့်ငွေကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
Live Stream ကြည့်ရှုသူ၏ Internet အခြေအနေ၊ ကြည့်ရှုနေသော Device ၏ ချို့ယွင်းမှုများရှိခဲ့သော် Live Stream ထုတ်လွှင့်သော အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
Live Stream စတင်မည့်အချိန်တွင်၊ Group အတွင်းမှ Live ကြည့်သူများ ရုတ်တရက်များပြားလာနိုင်သောကြောင့်၊ Group အတွင်းသို့ ကြိုတင်ဝင်ရောက်ထားပေးရန် အကြံပေးအပ်ပါသည်။
Live Stream စတင်နေချိန်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါက၊ မိမိကြည့်ရှုနေသော အချိန်မှသာလျှင် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစသို့ ပြန်လည်သွားရောက်၍ ကြည့်ရှုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Live Stream သည် အခမဲ့ Live Stream မဟုတ်သည့်အတွက် Live Stream တွင်ပါဝင်သော မူပိုင်ခွင့် နှင့်ပတ်သက်သော ပိုင်ဆိုင်မှုသည် Live Stream ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့သာလျှင် ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ Live Stream တွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို ဖြတ်ညှပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ကြော်ငြာအနေနဲ့ အသုံးချသည်များရှိခဲ့သော် တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။
ထုတ်လွှင့်ပြသနေသော Live Stream ကို အခကြေးငွေယူပြီး တဆင့်ပြန်လည် ပြသခြင်းရှိပါက၊ တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင့် ခံရမည်။
COVID-19 ကူးဆက်မှု မပြည့်ပွားရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဒေသ အဖွဲ့အစည်းမှ တားမြစ်ချက်များရှိခဲ့သော်၊ Live Stream ကို ဖျက်သိမ်းခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
COVID-19 ကူးဆက်မှု မပြည့်ပွားရေးအတွက် Live Stream လွှင့်ချိန်တွင်၊ စုဝေးကြည့်ရှုခြင့်ကို ရှောင်ရှားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်ကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
Live Stream ထုတ်လွှင့်ပြီးချိန်မှ၊ December 23, 23:59 PM အထိ Live Video ကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကို ကျော်လွန်သွားချိန်တွင် Live Stream Video ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
#Morisaki_Win #Morisaki_Win_AcousticLive #Myanmar_Edition
GOT7’s Jackson နဲ့ BTS’s RM တို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ...
December 18 မှာ ထွက်ရှိလာတော့မယ်လို့ Rumour တွေထွက်နေတဲ့ Wang ...